परम्परागत चिकित्साज्ञानलाई उपाधि….. | Ayurveda Khabar
Ayurveda ContentsDoctor's Articleअन्य समाचारसमाचार
परम्परागत चिकित्साज्ञानलाई उपाधि…..
आयुर्वेद एक प्राचीन महत्व बोकेको परम्परागत चिकित्सापद्धति हो । यो विभिन्न कालखण्डमा संगृहीत अनेकौँ तथ्य र त्यसका उपयोगिताहरूको अन्वेषणले जन्माएको विधा हो । सयौँ शताब्दी पुरानो यस चिकित्सा प्रणालीलाई आज पनि त्यही मूल्य र मान्यताका साथ रोगप्रतिरोधात्मक एवम् चिकित्सकीय विधिका रूपमा लिइँदा जनमानसमा आश्चर्य लाग्नु स्वाभाविक हो । विज्ञानले नयाँ र नौला तथ्यको अन्वेषणसँगै पुरानालाई विस्थापित गर्ने सन्दर्भ यस विधासँग मेल नखान सक्छ । यसको निचोडमा जवाफ, आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान कृृत्रिमत्व कृत्रिम वस्तुसँग आधारित)सँग कहिले पनि जोडिएन, प्रकृतिकै तत्वरूपी महाभूत, दोषकै आधारमा उत्तर एवम् उपाय खोजियो । अहिले पनि प्रकृतिका अनेकौँ नियम एवम् प्रभावमा परिवर्तन छैन, केवल परिवर्तन त मानव जातिका व्यवहार, संस्कार र आधुनिकतामा छ । आयुर्वेद परम्परागत ज्ञानको स्वरूप हो, जुन नेपालमा राष्ट्रिय चिकित्सापद्धतिका रूपमा स्थापित छ ।
पतञ्जलि योगपीठका आचार्य बालकृष्णले केही महिनाअघि आयोजित एक कार्यक्रममा नेपालमा भएका आयुर्वेद तथा परम्परासम्बन्धी मौलिक ज्ञान बोकेका हस्तलेखहरूको आधुनिकीकरण (डिजिटलाइजेसन)मा पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने बताएका थिए । पतञ्जलि योग संस्थानले योग तथा भारतमा रहेको आयुर्वेद एवम् परम्परागत ज्ञानसम्बन्धी अनेकौँ पाण्डुलिपिलाई आधुनिकीकरण गरी संरक्षण गरेको छ । त्यही ज्ञानको अध्ययनबाट विभिन्न नयाँ आविष्कार एवम् औद्योगिक योजना बनाइरहेको छ । त्यसैले त आज पतञ्जलि आर्थिक रूपमा सबल एवम् आयुर्वेदको अनुसन्धानमा अग्रणी भूमिकामा छ ।
सन् २०१८ मा भारतको केरेलानिवासी ७५ वर्षीय लक्ष्मीकुटी, जसलाई जंगलकी माताका रूपमा चिनिन्छ र जो एक परम्परागत वैद्य हुन्, उनलाई भारत सरकारले जीवनभर चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान गरेबापत प्रतिष्ठित पदम पुरस्कार प्रदान गर्यो । सोही वर्ष नेपालका आँखाका आधुनिक चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई चिकित्सा क्षेत्रमा सोही उपाधि प्रदान गरिएको थियो ।
सन् २०१८ मा भारतको केरेलानिवासी ७५ वर्षीय लक्ष्मीकुटी, जसलाई जंगलकी माताका रूपमा चिनिन्छ र जो एक परम्परागत वैद्य हुन्, उनलाई भारत सरकारले जीवनभर चिकित्सा क्षेत्रमा योगदान गरेबापत प्रतिष्ठित पदम पुरस्कार प्रदान गर्यो । सोही वर्ष नेपालका आँखाका आधुनिक चिकित्सक सन्दुक रुइतलाई चिकित्सा क्षेत्रमा सोही उपाधि प्रदान गरिएको थियो । परम्परागत चिकित्सक उपाधि पाउने लक्ष्मीकुटी मात्र एक प्रतिनिधि होइनन्, विगतमा भारत सरकारले यस क्षेत्रको विकास र उत्थानका लागि यस्ता चिकित्सक एवम् वैज्ञानिकहरूलाई उच्चतम उपाधि दिँदै आएको छ । लक्ष्मीकुटी आफ्नो जीवनभरको ज्ञान एवम् आफ्नी आमाबाट प्राप्त चिकित्सकीय ज्ञानबाट ५ सयभन्दा बढी जडीबुटीको प्रयोगद्वारा विभिन्न रोग तथा सर्प, कीटलगायत विषयुक्त जनावरको टोकाइको उपचार गर्छिन् । यही ज्ञानको उपयोग गर्दै उनले त्यस क्षेत्रमा ‘क्षेत्र प्रशामक एकाइ’को स्थापना गरेकी छिन्, जसलाई भारतले राष्ट्रियस्तरबाटै सहयोग एवम् मान्यता दिएको छ । उनको चिकित्सासीप, सर्वसुलभ र वैज्ञानिक रूपमा सफल छ ।
सन् २०१५ मा चिनियाँ परम्परागत चिकित्सापद्धतिमा आधारित अनुसन्धानबाट मलेरियाविरुद्धको आर्टिमिसिन तत्व पत्ता लगाएबापत युयटुले नोबेल पुरस्कार पाइन् ।’ त्यसपश्चात् यस्ता चिकित्सापद्धतिमा थप प्रमाणुस्तरका एवम् फार्माकोलोजीसम्बन्धी अध्ययन सुरु हुन थाले । नोबेल विजेता युयटुले परम्परागत ज्ञानका आधारमा चिकित्सामा प्रयोग हुँदै आएको तितेपातीको प्रजातिमा अन्वेषण गरेकी थिइन् । त्यसबाट प्राप्त रसायन आर्टिमिसिनको लामो अध्ययन एवम् खोजपछि मलेरिया उपचारका लागि प्रमाणित गरेकी थिइन् । आज यस्ता अनेकौँ ज्ञानमाथि बृहत् अनुसन्धान भइरहेका छन् र प्राकृतिक बहुमूल्य वस्तुहरूलाई त्यही रूपमा प्राकृतिक स्वरूपमा) अपनाउन खोजिँदै छ ।
हाम्रा गाउँघरमा यस्ता क्षमतावान् परम्परागत चिकित्सक, जो जिन्दगीभर बिरामीको उपचारमा सरिक भइरहे, यस्ता व्यक्ति नभएका होइनन् । तर, नेपालमा यस्ता परम्परागत चिकित्सकलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनु त परको कुरा, मान्यता नै दिएको छैन । आजको दिनसम्म पनि यस्ता चिकित्सकहरू डर–त्रासको स्थितिमा आफ्नो सीप चिकित्सामार्फत प्रदान गर्दै आएका छन् । कुनै देशमा ज्ञानलाई उपाधि दिइन्छ भने हाम्रो देशमा प्रतिबन्ध लगाइन्छ, गैरकानुनी मानिन्छ । राज्यको नीति र नियमन नहुँदा यस्ता सच्चा पद्धति एवम् यसमा आबद्ध चिकित्सकहरू लोप हुँदै छन् भने उपचारका नाममा गाउँघरमा ठगी गर्ने झोले डाक्टरहरूको बिगबिगी बढ्दो छ ।
छिमेकी देशहरू भारत र चीनले परम्परागत सीपलाई राष्ट्रको गौरवका रूपमा परिचित गराएको हामी देख्न सक्छौँ । योग विश्वमा भारतलाई चिनाउने बलियो माध्यम बनिसक्यो । त्यही योगलाई केही दशकपूर्व हाँसो बनाइन्थ्यो, अवैज्ञानिक मानिन्थ्यो, तर आज संसारलाई चकित पार्दै नसर्ने रोेगको न्यूनीकरण एवम् उपचारका लागि उत्तम उपाय बनेको छ ।
यस्ता परम्परागत चिकित्सकको समूहगत उपस्थिति छ, तर उनीहरूको मूल्य–मान्यता अहिलेसम्म स्थापित बन्न सकेको छैन । केही गैरसरकारी संस्थाहरूले उनीहरूको अभियानमा साथ दिन गोष्ठी, कार्यक्रम गरे पनि उनीहरू राज्यबाट सधैँ उपेक्षित बन्दै आएका छन् । उपेक्षित हुनुका पछाडि यो विधालाई सधैँ कमजोर देख्ने राज्यको रोग मुख्य कारणका रूपमा छ । छिमेकी देशहरू भारत र चीनले परम्परागत सीपलाई राष्ट्रको गौरवका रूपमा परिचित गराएको हामी देख्न सक्छौँ । योग विश्वमा भारतलाई चिनाउने बलियो माध्यम बनिसक्यो । त्यही योगलाई केही दशकपूर्व हाँसो बनाइन्थ्यो, अवैज्ञानिक मानिन्थ्यो, तर आज संसारलाई चकित पार्दै नसर्ने रोेगको न्यूनीकरण एवम् उपचारका लागि उत्तम उपाय बनेको छ ।
राज्यको यस कमजोरीपनका पछाडिको कारक एक मात्र छ, वैज्ञानिक तथ्यका साथ अघि बढ्न नसक्नु । त्यही परम्परागत ज्ञानलाई अन्वेषण, खोज एवम् शिक्षासँग जोड्न सके मात्र देशको शक्ति एवम् गौरव बन्न सक्छ । पक्कै पनि यस्ता चिकित्सकीय सिद्धान्तलाई आधुनिक अनुसन्धान विधिको ढाँचाबाट पुष्टि गर्न चुनौतीपूर्ण छ । विश्वका विकसित देशहरूमा, विशेषगरी औषधिसम्बन्धी अनुसन्धानमा नवीन अनुसन्धानको संकट छ । त्यसैकारण आयुर्वेद, राष्ट्रिय परम्परागत उपचारपद्धतिलगायत वैकल्पिक क्षेत्रमा विश्वका अनेकौँ देश आकर्षित छन् । यस्ता क्षेत्रमा बृहत् अनुसन्धान गर्नु उनीहरूको उद्देश्य छ । अबको समयलाई हामी नेपालीले देशमा रहेका यस्ता जनशक्तिलाई कमजोरी नभई अवसरका रूपमा ग्रहण गरी योग्य अनुसन्धानमा सरिक गराउन सके राष्ट्रकै लागि पहिचान र महत्वपूर्ण उपलब्धिको विषय बन्न सक्छ ।
Previous articleआसन मात्र योग होइन : डा वासुदेव उपाध्याय
Next articleYoga protects us all. Let us protect yoga too!!